Isitshalo se-oxygen PSA Oxygen & Nitrogen | I-Air Separation Unit - Izinsiza kusebenza ze-Oxygen Generator
IMPAHLA YOKUHLUKANISA EMOYENI
Izinzuzo Zomkhiqizo 1: Isilawuli seRotary Esizenzakalelayo Esiphelele. 2: Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi kakhulu. 3: Ukulondolozwa kwamanzi njenge-air compressor kupholiswa umoya. 4: 100% insimbi engagqwali ukwakhiwa ikholomu njengoba ngamunye ASME amazinga. I-5: I-Oxygen ehlanzekile ephezulu yokusetshenziswa kwezokwelapha / esibhedlela. I-6: I-Skid mounted version (Asikho isisekelo esidingekayo) 7: Isikhathi sokuqala esisheshayo nesikhathi sokuvala. 8: Ukugcwalisa i-oxygen kusilinda ngepompo ye-oxygen oxygen Application Fields Oxygen, nitrogen, argon nenye igesi engajwayelekile ekhiqizwa ...
Izinzuzo Zomkhiqizo 1.Ukufakwa okulula nokulondolozwa sibonga ukwakhiwa kwe-modular nokwakhiwa. Uhlelo 2.Fully okuzenzakalelayo for operation elula futhi enokwethenjelwa. Ukutholakala okuqinisekisiwe kwamagesi ezimboni ahlanzekile aphezulu. I-4 iqinisekisiwe ngokutholakala komkhiqizo esigabeni soketshezi okufanele igcinelwe ukusetshenziswa nganoma isiphi isikhathi sokugcinwa. 5.Low energy ukusetshenziswa. 6.Short isikhathi ukulethwa. Izinsimu Zokusebenza I-Oxygen, i-nitrogen, i-argon nenye igesi engajwayelekile ekhiqizwa yiyunithi yokwahlukanisa umoya ...
Izinzuzo Zomkhiqizo Sakha isitshalo somoya-mpilo sokugcwalisa isilinda ngezinto ezisetshenziswayo nezakhi. Senza ngezifiso izitshalo ngokwezidingo zamakhasimende nezimo zasendaweni. Sivelele emakethe yegesi yezimboni sinikeza inhlanganisela enhle kakhulu yezindleko nokusebenza kahle kwezinhlelo zethu. Njengoba zisebenza ngokuphelele, izitshalo zingasebenza zingagadiwe futhi zingenza nokuxazulula inkinga okukude. Ukucacisa ukuklama kukhuphula ukusebenza kahle futhi kwehlise ukusetshenziswa kwamandla ngaleyo ndlela konga isig ...
Izinzuzo Zomkhiqizo Siyaziwa ngobuchwepheshe bethu obuhle kakhulu bokwenza izitshalo zomoya-mpilo ezimanzi ezincike kubuchwepheshe be-cryogenic distillation technology. Ukuklama kwethu ngokunemba kwenza izinhlelo zethu zegesi zezimboni zithembeke futhi zisebenze kahle okuholela ezindlekweni zokusebenza eziphansi. Njengoba zenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme nezakhi, izitshalo zethu zomoya-mpilo zihlala isikhathi eside kakhulu zidinga ukunakekelwa okuncane. Ngokuhambisana kwethu nezinyathelo zokulawula ikhwalithi eziqinile, si h ...
Izinzuzo Zomkhiqizo 1.Ukufakwa okulula nokulondolozwa sibonga ukwakhiwa kwe-modular nokwakhiwa. Uhlelo 2.Fully okuzenzakalelayo for operation elula futhi enokwethenjelwa. Ukutholakala okuqinisekisiwe kwamagesi ezimboni ahlanzekile aphezulu. I-4 iqinisekisiwe ngokutholakala komkhiqizo esigabeni soketshezi okufanele igcinelwe ukusetshenziswa nganoma isiphi isikhathi sokugcinwa. 5.Low energy ukusetshenziswa. 6.Short isikhathi ukulethwa. Izinsimu Zokusebenza I-Oxygen, i-nitrogen, i-argon nenye igesi engajwayelekile ekhiqizwa ukwehlukaniswa komoya ...
Izinzuzo Zomkhiqizo 1: Umgomo wokwakhiwa kwalesi sitshalo ukuqinisekisa ukuphepha, ukonga ugesi nokusebenza okulula nokugcinwa. Ubuchwepheshe buhamba phambili emhlabeni. A: Umthengi udinga ukukhiqizwa okuningi ketshezi, ngakho-ke sinikezela ngenqubo yokufaka umoya ophakathi kabusha ukonga ukonga nokusebenzisa amandla. B: Sisebenzisa kabusha i-air compressor nesilingo esiphakeme, esiphansi. inqubo yokwandisa ukonga ukusetshenziswa kwamandla. 2: Yamukela i-DCS control computer ...
Izinzuzo Zomkhiqizo Sithatha izindlela ezahlukahlukene zokupakisha ngokuya ngezidingo ezithile. Izikhwama ezisongelwe namabhokisi enziwe ngokhuni zivame ukusetshenziselwa ukungangeni manzi, ukufakazisa ngothuli kanye nobufakazi bokushaqeka, ukuqinisekisa ukuthi yonke imishini ihlala isesimweni esifanele ngemuva kokubeletha. Ngokuphathelene nokuhlelwa kwempahla, inkampani inendawo yokugcina impahla enkulu kanye nesikhumulo semikhumbi esizimele esingamathani ayi-800. Singaletha amathani angama-500 wezinqola ezinkulu ngqo ngomsele osethekwini laseShanghai. Sinezinto eziningana ...
Incazelo Umphumela (Nm³ / h) Ukusetshenziswa kwegesi okusebenzayo (Nm³ / h) uhlelo lokuhlanza umoya ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 I-ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 Sakha futhi sithumela isitshalo se-oxygen esizenzakalelayo kanye ne-nitrogen isitshalo sokugcwalisa isilinda nge-cryogenic distillatio yakamuva ...
Incazelo Umphumela (Nm³ / h) Ukusetshenziswa kwegesi okusebenzayo (Nm³ / h) uhlelo lokuhlanza umoya ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 I-ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 Oxygen igesi ebaluleke kakhulu ekusekeleni impilo umhlaba, okhethekile esibhedlela, i-oxygen yezokwelapha idlala indima ebaluleke kakhulu ...
Incazelo Umphumela (Nm³ / h) Ukusetshenziswa kwegesi okusebenzayo (Nm³ / h) uhlelo lokuhlanza umoya ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 I-ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 Sakha isitshalo somoya i-PSA sisebenzisa iPSA yakamuva ( Ingcindezi Swing Adsorption) ubuchwepheshe. Ukuba ngumuntu ohola i-PSA oxygen plant manu ...
Incazelo Umphumela (Nm³ / h) Ukusetshenziswa kwegesi okusebenzayo (Nm³ / h) uhlelo lokuhlanza umoya ORO-5 5 1.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 I-ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 1: Izimboni zamaphepha neze-Pulp ze-Oxy bleaching kanye ukuhlehliswa 2: Izimboni ze-Glass zokunothisa isithando somlilo 3: Isisebenzi se-Metallurgical ...
Ukucaciswa kokukhishwa (Nm³ / h) Ukusetshenziswa kwegesi okusebenzayo (Nm) / h) uhlelo lokuhlanza umoya Abangenisi bezinga le-ORN-5A 5 0.76 KJ-1 DN25 DN15 ORN-10A 10 1.73 KJ-2 DN25 DN15 ORN-20A 20 3.5 KJ-6 DN40 DN15 I-ORN-30A 30 5.3 KJ-6 DN40 DN25 ORN-40A 40 7 KJ-10 DN50 DN25 ORN-50A 50 8.6 KJ-10 DN50 DN25 ORN-60A 60 10.4 KJ-12 DN50 DN32 ORN-80A 80 13.7 KJ-20 DN65 DN40 I-ORN-100A 100 17.5 ...